बैँक / वित्त::Nepal's News Portal
बैंकिङ्ग करियर (Banking career) मा आकर्षण किन ?
Banking Career ? पैसा तथा मुद्राको कारोवार गर्ने गरी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संगठित संस्थालाई बैंक भनिन्छ । बैंकिङ्ग क्षेत्र एउटा आकर्षकको केन्द्र पनि हो । देशको हरेका आर्थिक क्रियाकलापमा बैंकले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको...
काठमाडौँ : मेगा बैंकको गत आर्थिक वर्षमा निक्षेप सङ्कलन १९ अर्ब वृद्धि भई करिब ८२ अर्ब पुगेको छ । त्यस्तै गत वर्ष कर्जा प्रवाहमा रु १५ अर्ब ५० करोड वृद्धि भई करिब ७३ अर्ब पुगेको...
काठमाडौँ : धितोपत्र बजारमा आज शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक करीब छ अङ्कले उकालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ५।९४ बिन्दुले बढेर एक हजार २७७।१७ बिन्दुमा पुगेको छ...